Keyser Söze3days ago
AnandNepal 22 Hrs 13 Mins ago
AnandNepal3Hrs 13 Mins ago
Keyser Söze3Hrs7Mins ago
Visitor from US is reading CAMPION ACADEMY
[VIEWED 16066 TIMES]
Posted on 09-20-19 12:03 PM Reply [Subscribe]
पारसको बाघ आचरण
केहि समय अघि विमानस्थलमा पुर्व युवराज पारसले प्रहरीले उनका छोरा र भान्जालाई चेकजाँच गर्न खोज्दा प्रहरिमाथि दुव्र्यवहारको बारेमा खुवै चर्चा भएको थियो । उनले छोरा हृदयन्द्रको अनुहारमा प्रहरीको डण्डा देखेपछि होश गुमाएको भन्दै समाजिक संजालमार्फत बताए पनि।
यसै सन्धर्वमा एक चर्चित मोडल सोनिका रोकाया पारसलाइ ‘बाघ’ भन्दै पारसको अंगालोमा रहेको एक फोटो सार्वजनिक गरिन । सोनिकाले फेसबुकमा लेखेकी थिइन, ‘बाघ जहिले नि बाघ नै हुन्छ, जहाँ पनि गर्जने क्षमता राख्छ। बिरालो सम्झेर बाघलाई जिस्क्याउने चेष्टा नगरे हुन्छ।’
सोनिका रोकायाले लेखेको कुरा भन्दा पनि उनले शेयर गरेको फोटोको कारणले सोनिका र पारसको चर्चा हुन थालेको छ। त्यसको केहि समय अघि सोनिकाले दरवारमार्गमा खोलेको एक रेष्टुरेन्टमा पारस एक पुगेका थिए। त्यसपछि यि दुइ नजिकिएको देखिन्छ। पारस रेस्टुरेन्ट जाँदा सोनिकाले सारिमा सजिएर उनको स्वागत गरेकि थिइन।
त्यसपछि उनले शेयर गरेको फोटोमा उनि अर्कै पहिरनमा देखिएकि छिन भने सोनिका पारसको अंगालोमा मुस्कुराइरहेकि छिन ।
बेलाबेलामा बिभिन्न बिवादमा आइरहने पारस यस अघि एक थाइ युवतिको प्रेममा थिए। उनि ४ बर्ष अघि सन २०१५ मा नेपाल फर्केदेखि उनका पिता ज्ञानेन्द्रले घर आउन दिएका छैनन। उनको श्रिमति हिमानिसंग सम्बन्ध सुध्रन पनि सकेको छैन। केहि दिन अघि मात्रै उनि बसन्तपुर क्षेत्रका मठमन्दिरको पूजाका क्रममा उनि नशामा झुमिरहेको देखिएको थियो ।
बसन्तपुरको कुमारी, काल भैरवलगायतका मन्दिरमा हुने विशेष कार्यक्रममा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह थाइल्यान्डमा रहेको कारणले पारसलाइ बोलाइएको थियो । उनि नशामा आए पनि उनले कुमारी, काल भैरव मन्दिरमा पुजाआजा भने गरेका थिए।
पारसको आचरणको बारेमा कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद ।
(यो स्क्रिप्ट निम्न भिडियो बनाउनको लागि लेखिएको हो। :)
Posted on 09-20-19 8:05 PM [Snapshot: 592] Reply [Subscribe]
यसै सन्धर्वमा यो प्रेम कथा पनि चाखलाग्दो हुन सक्छ
अनि हिमानिको बायोग्राफि
अनि कन्निकाको बायोग्राफि
Posted on 09-25-19 12:37 PM [Snapshot: 6401] Reply [Subscribe]
*** यो लेख निम्न भिडियो बनाउनको लागि लेखिएको स्क्रिप्ट हो ***
सप्रिन लागेका पारस फेरि किन उद्दण्ड भए? कसले उद्दण्ड बनायो ?*
- थाइल्यान्डमा पुर्व युवराज पारस - लागुऔषध केसमा चार पटक पक्राउ परे
- एक पटक गम्भिर बिरामि भएर हप्तौं सम्म बेहोस भए - तर, भाग्यले बाँचे
- लागुऔषधको लत र गम्भिर बिरामिको कारणले बिजोग देखिएका पारस त्यसपछि सन २०१५ मा नेपाल फर्के ।
नेपाल फर्के पछि उनको उद्दण्ड स्वभाव मा नियंत्रण भएको थियो । उनि मठ मन्दिर जाँदै गरेको, परिवारसँग भेटघाट गरेको देखिन्थ्यो। बेलाबेलामा पारसको परिवारसंग सम्बन्ध सुध्रेको समाचार पनि आउँथे। तर,नेपाल फर्के पछि पनि उनलाइ उनका पिताले निर्मल निवास प्रवेश दिएका थिएनन। अहिले सम्म पनि उनि घर फर्कन पाएका छैनन।
थाइल्यान्ड बसाइका क्रममा उनको थाइ युवतिसंगको अफेयर्सको कारणले उनको श्रिमति हिमानि शाहसँग उनको सम्बन्ध पनि सुध्रन सकेन । उनि छोराछोरिसँग नजिक भएको र संगै घुम्न गएका तस्बिरहरु पनि सार्वजनिक भएका थिए। पारसमा अभिभावत्व्कको दायित्वबोध भएको जस्तो देखिएको थियो। उनि साँच्चिकै सुध्रे कि भन्ने आशा पलाएको थियो।
- अब प्रश्न उठछ के पारस बिग्रनुमा उनकै गल्ति छ र? उनले सुध्रने प्रयास गरेकै जस्तो देखिन्छ।
- देश फर्केर आएको छोरा पारसलाइ घर भित्रै बस्न नदिने आमा बाबु को गल्ति नहोला?
- प्रेमिकालाइ छोडेर फर्केका पारस बाट तर्केरै हिडिरहेकि श्रिमति हिमानिको पनि गल्ति नहोला र ?
- अनि, दुबै छोरिहरुलाइ पढनको लागि थाइल्याण्ड लगिनुको पनि कुनै हात छ कि ?
पारसलाइ कसैले माया नगरेको, सबैले एक्ल्याएर नै उनि उद्दण्ड भएका त होइनन ?
Posted on 10-15-19 1:51 PM [Snapshot: 15315] Reply [Subscribe]
Posted on 10-15-19 1:59 PM [Snapshot: 15329] Reply [Subscribe]
सोनिका संग पारस, पारससंग सोनिका।
Posted on 10-17-19 10:07 PM [Snapshot: 15822] Reply [Subscribe]
;) @Kyser Soze
पारसको भनाइ - म हिजाको जस्तो होइन, अब कुनै गल्ती हुँदैन
मोडल तथा युट्युबर सोनिका रोकायासँगको सम्बन्धका कारण चर्चाका आएका पूर्वयुवराज पारस शाहलाइ खबरहब अनलाइनले सम्पर्क गरेको बताएको छ। सो अनलाइन् संग भएको संक्षिप्त कुराकानीमा पारसले आँफु स्वतन्त्र नागरिक भएको ले हरेक काम गर्न आफू स्वतन्त्र भएको बताएका छन।
तेस्तै, उनले आफू राजा हुने आशक्तिको मानिस नभएको पनि बताएका छन् । तेस्तै सोनिका रोकाया लिएर मोटरसाइकलमा हुँइकिएको भिडियो बारे गरिएको प्रश्नको जवाफमा पारसले ,‘म राजा हुँ र मोटरसाइकलमा हिँड्दा लाज मान्नुपर्ने ?’ भनेर उल्टो प्रतिप्रश्न गरेका छन । तेस्तै उनले आफू राजा हुनका लागि नजन्मिएको र राजसी ठाँटको मान्छे पनि नभएको बताएका छन।
पारसको भनाइ भन्दै खवरहब लेख्छ ‘मोटरसाइकलमा हिँड्दा स्वतन्त्र हुन्छु, त्यसैमा हिँड्छु। म साधुको जस्तो जीवनशैली बिताउँछु ।’
निर्मल निवासमा प्रबेश नदिइएको बारेमा गरिएको प्रश्नमा उनले आँफु निर्मल निवासमा नभएर छुट्टै अपार्टमेन्टमा बसिरहेको पनि बताएका छन उनले भनेका छन,‘ धन सम्पत्तिको नाममा मसँग एउटा मोटरसाइकल, गाडी र अपार्टमेन्ट मात्र रहेको छ ।’
शक्ति आशक्ति नभएको बारेमा पारसले भनेका छन,‘म राजा हुने आशक्तिको मान्छे होइन, ज्ञानी र ध्यानी हुन्छु, अध्ययनमै समय बिताउँछु ।’
पारसको जीवनशैली र व्यवहारबारे भै रहेका कुरा बारे उनि भन्छन : ‘जसले जे सुकै भनोस्, म खुला मान्छे हुँ र त्यही चाहन्छु, लुकाउन के जरुरी छ र !’
आजकल पारस पूर्वीय दर्शनको अध्ययनमा लागेका छन रे - उनि भन्छन ‘म अहिले पूर्वीय दर्शनको अध्ययनमा छु, म हिजाको जस्तो होइन, अब कुनै गल्ती हुँदैन ।’
तेस्तै पारस संगको सम्बन्धको बारेमा सोनिकाले उनि र पारस तीन महिनादेखि नजिक रहेको बताएकि छिन । सोनिकाले पारससंग उनको सम्बन्ध एक अभिभावक जस्तै भएको प्रतिक्रिया दिएकी छिन् ।
Posted on 10-18-19 5:07 PM [Snapshot: 15996] Reply [Subscribe]
(स्क्रिप्ट लेखिसकेर पनि .... भिडियो अति धेरै भो जस्तो लाग्यो -- यो बारेमा चर्चा गर्न मन लागेन।
२-४ दिन पछि बनाउँला भिडियो। )
पूर्व युवराज पारस भन्छन: म राजा हुन जन्मिएको हैन !!
दशैंको टीका लगाएपछि रिफ्रेश हुन पोखरा आइपुगेका पूर्व युवराज पारस शाहले ‘म राजा हुन जन्मिएको हैन, र, राजशी शैलीमा बाँच्ने मेरो कुनै चाह छैन ।’ भनेका छन।
पारसले चिनी बढी हालेर कालो चिया पिउँदै हुक्का आँफुले मृत्युलाई निकै नै नजिकबाट नियालेको अनुभव साट्दै थिए । सन २०१४ मा पारस थाइल्याण्डमा हृदयघात भएर हप्तौं बेहोस भएका थिए। बाँच्ने आशै मारिइसकेका पारसले नवजिवन पाए।
तेस्तै आँफ्नो परिवारले राजगद्धि नै त्यागेको सम्झँदै पारसले नेपाली जनताले चाहेमा उनले जुनसुकै त्याग गर्न सक्ने बताएका थिए।
सुख के हो ? भन्ने कुरा आँफुलाइ निकै नै राम्रो संग थाह भएको जस्तै दुख के हो भन्ने पनि उनले त्यति नै राम्रो संग भोगेका बताउँछन । उनले ‘समय नै दुःखको मल्हम हो’ भन्दै आफूलाई सम्हाल्न आध्यात्मिक संसारको सहारा लिएको र त्यसले उनलाइ नयाँ जिवन दिएको पारसको अनुभव रहेको छ ।
अंग्रेजि अक्षर A for एप्पलबाट सुरु भइ Z for जेब्रामा अन्त्य हुने ।
तर, हाम्रो क कलमबाट शुरु भई ज्ञ अर्थात ज्ञानिमा अन्त्य हुन्छ रे - तेसैले अंग्रेजि नपढौं नेपालि पढौं भन्छन पारस।
Posted on 10-18-19 5:13 PM [Snapshot: 16003] Reply [Subscribe]
No ones stays same. Growing ages teaches lesson to everyone.